Bamele elakuleli phesheya kwezilwandle | News24
Bamele elakuleli phesheya kwezilwandle
isithombe: Bridget Ringdahl
NGENYANGA kaNcwaba iqembu, iWater Explorer yesikole samabanga aphansi, Ebomvini Primary saseZingolweni samemezelwa njengeqembu elihamba phambili ngemisebenzi yabo emihle abayenzayo okubalwa kuzo ukugada izilwane zasemanzini, ukuzakhela elazo ichibi ukuze bahehe amaxoxo engadini eyaziwa nge-permaculture.
Leli qembu elihamba phambili eNingizimu Afrika lisanda kuhambela phesheya kwezilwandle ukuyomela izwe lalo emcimbini obizwa ngokuthi International Water Exlporer, eyayibanjelwe komkhulu lebhenge elikhulu kunawo wonke emhlabeni, eCanary Wharf London.
Iqembu laseNingizimu Afrika lihlanganyele namanye amaqembu aqhamuka kumazwe ngamazwe, okulapho bezogubha ndawonye impumelelo yabo yokonga amanzi futhi namphrojekthi abawenze ngonyaka odlule.
Limangaze abaningi leli qembu ngesikhathi ligixabezwa ngendondo ye-Innovation and Student’s Choice Award for Water Explorer 2018. Uthisha owengamele leli qembu, uNkk Youth Mavundla uthe ukufika kuleliyazwe kuyintokozo enkulu kubona kodwa ukuhlomula kubashiye nomuzwa wokuziqhenya kanye nokuzithoba.
Abafundi babanga lesi -7 ababehambe nothisha ukuyomela isikole kanye nelakuleli okungu Esihle Gasa beno-Asiphile Mkhonde, baveze ukuthi bekungokokuqala ngqa bengibela abhanoyi.
“Ngikuthokozele ukubona indawo ebizwa ngeLondon Eye, Big Ben kanye nonogada basebukhosini baseBuckingham, “ kusho u-Esihle Gasa.
Lomfundi uthi kumjabulise kakhulu ukuhlanganyela nabafundi bakwamanye amazwe kanye nokuzwa ukuthi imaphi amaphrojekthi abawenzile aphathelene namanzi.
Lesisikole asigcinananga lapho kodwa sibuye sahlomula ngendondo ebizwa ngokuthi International Youth WAFA Award (Water Air and Food, Awards), okuyindondo ehlonyuliswa labo abenza imizamo yokwenza izinto ezihlukile emphakathini ekongeni amanzi ezweni lonkani.